Ciyaaryahan Caan ah oo Soomaaliya ugu deeqay deeq raashin ah – Geelle Magazine
Ciyaaryahanka asal ahan kasoo jeeda dalka Turkiga ee Ozil ayaa kafaale qaaday afurinta 16,000 oo qof bisha Ramadaan, kuwaas oo ka kooban 2,000 qoys oo Suuriyaan iyo Turkish ah.
Dhanka kale Mascuud Ozil ayaa 90,000 oo raashin Af-fur ah ugu deeqay Soomaaliya, taasi oo lagu qeybin doono magaalada Muqdisho, waxaanu lacagta ku baxaysa oo caddadkeedu dhan tahay £80,000 uu gacanta ka saaray Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga.
Madaxa Bisha Cas ee Turkiga ayaa wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalkaasi Turkiga u sheegay in sannadka oo dhan ay quudiyaan dadka baahan, waxaanu u mahadceliyey muxsiniinta sadaqada ugu tabaruca ee la socda shaqadooda.
Kerem Kinik waxa uu yidhi: “Bisha Cas ahaan, waxaanu garab taagan nahay kuwa baahan 365-ka maalmood ee sannadka. Dabcan, waxa aanu taakuladan uga mahadcelinaynaa qaadhaan bixiyeyaasha saaxiibada ah ee nala shaqeeya”.
Xiddigan heerka caalami ee xulka qaranka dalka Germany oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkey, waxa sannadkii uu sadaqo ku bixiyaa lacag lagu qiyaasay £2 milyan.
Si kastaba, Ozil ayaa dhawaan iska diiday inuu ogolaado in Arsenal ay mushaarkiisa ka jarto lacag dhan 12.5% oo ay ciyaartoyda kale ee kooxdu ogolaadeen, hase yeeshee waxa muuqata in lacagtiisa uu u adeegsanayo bixinta qaadhaan Diinta Islaamku jidaysay oo uu Allah ugu dhowaanayo.
Kheyre oo ka qeybgalay kulanka Guddiga qaran ee kahortagga Covid 19